नेवाः टाइम्स – - Page 11
November 29, 2021 1 min	6 dys
November 4, 2021 1 min	1 mth
November 4, 2021 1 mth
October 21, 2021 1 min	2 mths
September 27, 20212mths
September 16, 20213mths
by बसन्त महर्जन	 November 29, 202101 min	6 dys
by बसन्त महर्जन	 November 4, 202101 min	1 mth
by बसन्त महर्जन	 November 4, 202101 mth
November 29, 2021 0	1 min	6 dys
November 4, 2021 0	1 min	1 mth
November 4, 2021 0	1 mth
July 5, 202101 min	5 mths
‘फूलको आँखामा फूलै संसार’ हुने हो भने बुद्धले अरुलाई पनि बुद्ध नै देख्नुपर्ने थियो र करुणाको जरुरत नै पर्दैनथ्यो ।
‘फूलको आँखामा फूलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार’ –नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चित एवं लोकप्रिय गीतको पङ्ति हो । अति भावुक र कोमल शब्दहरूको संयोजनबाट गीत तथा कविताहरूको सिर्जनामा जीवन अर्पण गरेका कवि दुर्गालाल श्रेष्ठको यो सिर्जनालाई घरगृहस्थी त्याग गरी बौद्ध संघमा प्रवेश गरेका आनी छोइङ् डोल्माले स्वर दिएकी छन् र यो गीत नेपाली जनजीवनको जिब्रोमा नै बसेको पाइन्छ । सामान्य कुराकानीदेखि गम्भीर बहसमा समेत यो गीतको पहिलो पङ्तिलाई उद्धृत गर्ने गरिन्छ । तर गीतका पङ्तिहरूलाई यत्तिकै सुन्ने र सुनाउने हो भने साह्रै मिठास लागेपनि सोचविचार गर्दा गीतका प्रायः पङ्तिहरूको आसय ठम्याउन गाह्रो हुन्छ । यहाँ यही कुरालाई ध्यानमा दिएर समीक्षा गरिएको छ ।
(प्रस्तुत लेख पहिलाे पल्ट १ पुस २०७७ मा साहित्यपाेस्ट डटकममा प्रकाशित भएकाे हाे । साेही डटकममा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नु हाेला ।)
July 4, 202105 mths
प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति लयमा फर्कंदै
परम्परागत रुपमा भिटामिन डिको क्याप्सुल खाने होइन, घाम तापिन्थ्यो । पसिना निकालेर मोटोपन घटाउने, माटो स्नान गरेर छालासम्बन्धी रोग निको पार्ने आदि गरिन्थ्यो ।
काठमाडाैं, २२ असार । मानव सभ्यताको इतिहास तथा नेपालकै पनि सामाजिक विकासका क्रममा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अग्रणी स्थानमा आउँछ । तर, पछिल्लो समय हराउँदै गएको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति संरचनागत रुपमा फेरि अगाडि बढ्ने कोशिसमा आज असार २० गते नेपालले प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाउँदैछ ।
परम्परागत रुपमा भिटामिन डिको क्याप्सुल खाने होइन, घाम तापिन्थ्यो । पसिना निकालेर मोटोपन घटाउने, माटो स्नान गरेर छालासम्बन्धी रोग निको पार्ने आदि गरिन्थ्यो ।आधुनिक चिकित्सा पद्दतीको शुरुवातसँगै प्राकृतिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा विस्तारै छायाँमा पर्दै गएकोमा पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि यो चिकित्सा पद्दतिले संस्थागत रुपमा विस्तारित हुन थालेको छ ।
कोविड–१९ संक्रमणको वास्तविक उपचारका लागि औषधि नभएको अवस्थामा धेरैले प्राकृतिक चिकित्सा तथा आयुर्वेदबाटै उपचार होला कि भन्ने अपेक्षा गरे । त्यसमाथि पनि कोविड संक्रमण भइसकेकाहरु पनि सकेसम्म नकारात्मक असर नगरोस् भनेर प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद उपचार तिर गएको पाइन्छ । सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय, नवलपुरका चिकित्सक डा. विनोद पौडेलका अनुुुसार उहाँको चिकित्सालयमा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु विना ७८५ जना संक्रमण मुक्त उपचार गरेर गए । चिकित्सालयमा शुरुका दिनमा निकै हतोत्साहित तुल्याउनेहरु नै उपचार गराउन आउँन थालेको र एलोपेथिक डाक्टरहरु पनि नेचुरोपेथी उपचारमा आउँन थालेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ– एलोपेथिक डाक्टरहरु नै कतिपय रोगको उपचारका लागि प्राकृतिक चिकित्सालयमा आउन थालेका छन्, १० वर्षमा जुन किसिमको परिवर्तन आयो, खुशी नै छौं ।
चिकित्सालयले गत वर्ष कोविड संक्रमण शुरु भएपछि ३०० शैय्याको अस्पताललाई जिल्ला सामुदायिक अस्पतालका रुपमा काम गर्न शुरु गरेको थियो ।
औषधिविना, चिरफार नगरी, वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा तथा परम्परागत रुपमा पञ्चतत्व तथा पञ्चमहाभूत( पृथ्वी, जल, तेज, बायु, आकास)को सहायताले गरिने उपचार पद्दतिलाई प्राकृतिक चिकित्साको रुपमा लिइएको छ । रोगको लक्षणको भन्दा कारणको उपचार गर्नुपर्ने मान्यताअनुसार वातावरण फोहर बनाएर झिंगा मार्दै बस्नु भन्दा वातावरणलाई सफा गर्नुपर्ने प्राकृतिक चिकित्सकहरु बताउँछन् । प्राकृतिक उपचार पद्दतिलाई एउटा पूर्ण उपचार पद्दतिका रुपमा अपनाइएको पाइन्छ ।
डा. जनक बस्नेतकाअनुसार कोविड संक्रमण पछि ३० भन्दा बढी लक्षणहरु देखिएको छ । पोष्ट कोविड विभिन्न अंगमा हुने स्वास्थ्य समस्या, निको हुन समय लाग्ने, उपचारका क्रममा प्रयोग गरिएका औषधिको नकारात्मक असर (साइड इफेक्ट), आइसियु तथा भेन्टिलेटरको प्रयोग पछि देखिने समस्या, स्ट्रोकपछि हुने प्यारालाइसिसजस्ता रोगले सताउने गरेको डा. बस्नेत बताउँछन् ।
स्वास्थ्य समस्यासम्बन्धी अधिकांश पक्षलाई आफ्नो शरीरलाई मेन्टेन गरेर पनि उपचार गर्न सकिने डा. जनक सुझाउँछन् । घँुडा दुख्दा– शरीरको तौल घटाउने, खुट्टाको मांशपेशीलाई दरिलो बनाउने तथा रक्तसंचार हुने खालको शारीरिक अभ्यास गर्ने, घुँडाको चिल्लो पदार्थ बढाउने पौष्टिक खानेकुरा खाएर निको पार्न सकिने डा. जनकको तर्क छ । अर्थात, प्राकृतिक चिकित्साबाट नै अधिकांश पोष्ट कोविड लक्षणहरुको उपचार गर्न सकिने र गर्दै आएको उनी बताउँछन् । प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत उपचार गर्दा– रोग अनुसारको खाद्यान्न विधि, योग, जल उपचार, मसाज, अकुपंचर तथा मानसिक तनावका कारण भएको रोगलाई मानसिक परामर्श दिएर उपचार गर्ने गरिन्छ ।
प्राकृतिक चिकित्सक डा. हरिप्रसाद पोखरेलका प्राकृतिक चिकित्सालाई पनि मूलधारको चिकित्सा पद्दतीका रुपमा लिइनुपर्छ । यसलाई सिमान्तकृत रुपमा उपेक्षाको भावमा लिइनुहुँदैन । नेपालमा २०३६ सालदेखि प्राकृतिक चिकित्साको बारेमा चर्चा परिचर्चाका साथै तत्कालीन सरकारले अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्न थाल्यो । २०५८ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र एउटा योग तथा चिकित्सा समिति बन्यो । यो समितिले २०५९ असार २०गते प्राकृतिक चिकित्सालाई मूलप्रवाहको चिकित्सा पद्दतिको मान्यता दियो । प्राकृतिक चिकित्साले पहिलो पटक कानुनी पहिचान पायो र यही दिनको सम्मानमा विश्वमैं नेपालले पहिलो पटक प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाउन थाल्यो ।
डा. पोखरेलका अनुसार प्राकृतिक चिकित्सालार्इ देशव्यापी रुपमा अगाडि बढाउने संकल्प लिइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरमा झन् बढी संक्रमितमा समस्या देखिएको कारण पोष्ट कोविड लक्षणका लागि अनौपचारिक सेवा मात्र नभई आधुनिक रुपमा प्रतिस्थापनसहित देशका प्रमुख सहरहरुबाट प्राकृतिक चिकित्सा सुचारु छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष तथा जनस्वास्थ्यविद डा. शरद वन्तका अनुसार कुनै पनि चिकित्सा पद्दति (एलोपेथिक, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक) परिपूर्ण नभएको अवस्थामा विविध प्रणालीलाई समग्र रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ । कुनै पनि ज्ञान कालजयी नहुने, हिजो राम्रो भनिएको औषधि नराम्रो पनि सावित भएको उदाहरण दिंदै डा. वन्तले जानकारी गराए– चीनले पनि आफ्नो परम्परागत चिकित्सा पद्दतिमा संशोधन गरेको छ, पहिला अत्यधिक धातु प्रयोग हुँदै आएकोमा संशोधन गरेको छ । ‘नविनतम ज्ञानको खोजी सबै चिकित्सकीय पद्दतीमा हुनु पर्ने र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली पनि विज्ञान भएकोले यसलाई अनुमान, अन्धविश्वासमा होइन स्थापित तथ्यको आधारमा फराकिलो बनाउँदै मजबुत बनाउनुपर्छ ’डा. वन्तको कथन छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा स्रोत केन्द्रद्वारा आयोजित जुम कार्यक्रममा बोल्दै डा. वन्तले प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली मानव सेवाका लागि हुनु पर्ने, यसमा हुनसक्ने अत्यधिक व्यापारिकरण रोक्न सचेत र चनाखो हुन आव्हान गर्नुभयो ।मसाज, योग तथा यससँग प्रयोग हुने वस्तुहरु सबैमा व्यापारिकण हुँदै आएको अवस्थामा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतीलाई व्यापारिकणमुक्त पार्नु चुनौतिपूर्ण भने छ ।
July 2, 202101 min	5 mths
July 1, 202101 min	5 mths
यस अघि सोचेको थिएँ, बाहुन डाडाँमाथि जोन उडको ठूलै कृपा परेको छ । शिक्षाको उज्यालो धपक्कै बलेको होला । एक चोटी त हेर्न जानु पर्ने हो । तर यो त भ्रम पो रहेछ । लोकनाथ भन्छन्– ‘‘यो भ्रम तपाइलाई मात्र होइन धेरैमा रहेको पायौं ।
अर्खलेबेसी पुग्दा दिउँसो चार बजिसकेको थियो । लमजुङको सदरमुकाम नजिकैको गाउँ खुदी हुँदै आएको, नाइचेमा वास बस्न जाने योजना थियो । त्यहाँबाट मस्र्याङ्दी नदी तर्नु पर्दछ । एउटा झोलुङ्गे पुल रहेछ । पुलको पारी एक प्रकारको तमासा नै भइरहेको थियो । भएको के रहेछ भन्दाखेरि उताबाट राङ्गा ल्याउन लागेका रहेछन् तर राङ्गा पुल तर्न ज्यान गए मानको होइन, डराएर । पहिलो राँगो त्यस्तै दश फीट जति अगाडि बढिसकेर उईँक्क पनि नचलेको, अर्को मान्दै नमानेको । टाउको छोपेर हिंडाउने प्रयास पनि गरेका रहेछन्, तर पुल हल्लिएर डराएछन् । यसै त ढिलो भइसकेको, त्यसमा पनि ढिलो गर्दा नाइचे पुग्न समस्या हुने भएकाले बाटो लाग्यौं । पुल तरेपछिको उकालो नै लामपातेको उकालो रहेछ ।
ओर्खलेबेसीमा लोकनाथ घिमिरेसँग परिचय भएको थियो । बाहुन डाडाँको एउटा विद्यालयका शिक्षक । घरतिर जान लागेका । लामपाते डाडाँसम्म सँगै हुने भएकाले सँगै हिडेका थियौं । बाहुन डाँडाको नाम थुप्रै सुनेको भएपनि पुग्न पाएको छैन । यसअघि यसै डाँडाको मुन्तिर रहेको तातोपानीमा नुहाएको थिएँ । यस पल्ट भने त्यहाँ जाने योजना छैन । नेपालका केही गाउँठाउँ यस्तो पनि पाइन्छ, जसको नाउँ एक जातिको हुन्छ तर त्यहाँ त्यस जातिको नामोनिशान नै हुन्न । कुनै बेला त्यस जातिको बसोवास हुने भएर गाउँकै नाउँ रहन जाने तर तिनीहरू विस्थापित वा बसाईसराई गरेर अन्त गएपछि यस्तो हुने गर्दछ । बाहुन डाडाँ भने त्यस्तो होइन रहेछ । बाहुन नै बाहुनको गाउँ भएरै बाहुन डाडाँ राखिएको । बाहुन, त्यसमा पनि घिमिरे थरका बाहुन । त्यसै गाउँको नामबाट गाउँविकास समितिकै नाम राखिएको रहेछ । त्यस गाविस अन्तर्गत वडा नम्बर ५ मात्रै बाहुनडाडाँ रहेछ । लोकनाथका अनुसार कतैबाट कसुमाकर घिमिरे भन्ने व्यक्ति यस डाडाँमा आएर बसेका थिए र उनैका सन्तानहरू नै हाल बाहुनडाडाँका घिमिरेहरू हुन् । वास्तवमा गुल्मी जिल्लामा घमिरे भन्ने एउटा सानो ठाउँ छ, त्यस गाउँका बाहुनहरूको थर सोही घिमिरे गाउँबाट नै घिमिरे बनेको हो । अर्थात् घमिरे गाउँका गाउँलेको नाम नै घिमिरे हो र हाल ब्राम्हणहरूको एक समूहको थर वा पहिचान नै घिमिरे बनेको छ ।
लोकनाथ भन्छन्– ‘‘सर, आधुनिक जमानामा हाम्रा रीतिथितिहरू फेरिंदै गएका छन् । अरुको त के कुरा, हामी ब्राम्हणहरूकै नै रीतिथिति फेरिंदो छ, पहाडिया ब्राम्हणहरूको संस्कृति संस्कारको अध्ययन गर्न उपयुक्त ठाउँको खोजी गर्न नै मुस्किल पर्ने भइसक्यो तर धन्दा नमान्नुस् कुनै बेला यस विषयमा अध्ययन गर्ने सोच आयो भने हाम्रो बाहुन डाडाँ आउनु, सबै कुरा पाउनु हुनेछ । हिन्दू धर्मअनुसार गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रीतिथिति र संस्कार संस्कृृति कायम नै छ ।
‘‘ब्राम्हण समाजमा रामायण नाटकको मञ्चन गराइने परम्परा छ, हाम्रो गाउँमा पनि यसको मञ्चन गराइन्छ’’ उनी भन्छन्– ‘‘हाम्रो गाउँमा त्यसको गुरु म आफै हुँ ।’’
लेखक जोन उडको ‘माइक्रोसफ्टदेखि बाहुनडाँडासम्म’ पुस्तक प्रकाशित भएपछि बाहुन डाँडाको चर्चा चुलिन थाल्यो । भनें– ‘‘जोन उडले धेरै गरेको हो, हैन त ?’’
लोकनाथले ठाडै अस्वीकार त गरेनन् तर स्वीकारोक्ती पनि होइन । घुमाउरो पारामा आफ्नो कुरा राखे–‘‘हेर्दा बाहुनडाँडालाई जोन उडले धेरै दिएजस्तो देखिन्छ तर धेरै पाउने त जोन उड आफै पो हो त ।’’
‘‘बाहुन डाडाँमा पहिल्यैदेखि स्कूल थियो । स्कूल राम्रैसँग चलेको पनि थियो । तर बिचमा आएर अलि कमजोर बन्यो ।’’ बाहुन डाँडाको इतिहास बताउन थाल,े लोकनाथ । म उत्सुक थिएँ, बाहुन डाडाँको कुरा सुन्न । उनी आफ्नो कुरा अगाडि बढाउँछन्– ‘‘हामी कवि माधव प्रसाद घिमिरेको नाममा एउटा वाचनालय बनाउने भनेर लागेका थियौं, स्वयं माधव घिमिरे र अन्यबाट पुस्तकहरू संकलन गरेका पनि थियौं तर स्थानाभावले त्यसलाई त्यही स्कूलको एउटा कोठामा हाल्यौं र पछि स्कूलमा नै गाभ्यौं ।’’
लोकनाथ जोन उडका सम्बन्धमा सुनाउँछन् – ‘‘आजभन्दा पन्द्रह वर्षअघि जोन उड हाम्रो बाहुनडाडाँ पुगेका रहेछन, हामीलाई थाहा नै थिएन । तर बाहुन डाडाँमा पुगेपछि उसको जीवन नै परिवर्तन भएको रहेछ । किताव पढिसकेपछि मात्रै थाहा भयो ।’’
यस अघि सोचेको थिएँ, बाहुन डाडाँमाथि जोन उडको ठूलै कृपा परेको छ । शिक्षाको उज्यालो धपक्कै बलेको होला । एक चोटी त हेर्न जानु पर्ने हो । तर यो त भ्रम पो रहेछ । लोकनाथ भन्छन्– ‘‘यो भ्रम तपाइलाई मात्र होइन धेरैमा रहेको पायौं । पुस्तक प्रकाशनपछि ‘रुम टु रीड’का प्रतिनिधिहरूसँग भेट गर्न गएँ । मेरो गुनासो थुप्रो थियो । लामो कुरा पनि भयो । पछि दुवै तर्फको संयोजकको रूपमा मलाई तोकिएको छ । केही किताव दिइसकेको छ भने केही आउन बाँकी छ । जोन उड आफै पनि एक पल्ट पुनः बाहुन डाँडा आउने कुरा’नि छ ।’’
लुम्बिनी क्षेत्रको भ्रमण गरिनसकेका वा भ्रमणका लागि त्यहाँ पुगेकाहरूले सामना गर्ने एउटा समस्या हो, त्यस स्थल सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तकको अभाव । कहाँ के हेर्ने र के कुरा कुन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित छन् भनेर थाहा नपाउँदा पर्यटकहरू रनभुल्लमा पर्छन् ।
न्युरोड, काठमाडौंस्थित नेपाल–भारत सांस्कृतिक केन्द्रको पुस्तकालयमा बौद्ध सम्पदास्थल सम्बन्धी एउटा डकुमेन्ट्री प्रदर्शन हुँदै थियो । त्यहाँ अचानक विवाद उठ्यो । विवादले चर्को रूप लियो । प्रश्न थियो, बुद्ध कहाँ जन्मेका हुन् ?
डकुमेन्ट्रीमा बुद्धको जन्म भारतको उत्तरी सीमामा भएको भनिएको थियो भने लुम्बिनी भनेर देखाएको दृश्य चाहिँ नेपालकै थियो । कुरा स्पष्ट थियो– भारतको उत्तरी सीमा भनेर कपिलवस्तुलाई भनिएको हो । प्राचीन कपिलवस्तु वर्तमान अवस्थामा नेपाल र भारत दुई देशमा विभाजित छ । दुवै देशमा विभाजित कपिलवस्तुलाई आआफ्नो भूभागको कपिलवस्तुलाई मात्रै ‘कपिलवस्तु’ भनेर दुबै देशका एक वर्ग दावी गर्दै आइरहेका छन् । फेरि नेपालमा अर्को वर्ग पनि छ, कपिलवस्तु र लुम्बिनी एकै हो भनेर बुझ्ने । अनि, जब भारतको पिप्रहवालाई कपिलवस्तु भनिन्छ, तिनीहरू बुद्धको जन्मस्थलमाथि भारतले दावी ग¥यो, नक्कली लुम्बिनीको निर्माण गर्दैछ वा झुठो प्रचार ग¥यो भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै कुर्लन थाल्छन् । यसै विषयमा नेपाली पत्रकारिताले पनि थुप्रै शब्द खर्चिसकेको छ । डकुमेन्ट्री प्रदर्शनका बेला पनि यही कुराको पुनरावृत्ति भएको थियो । आफ्नो बुझाइअनुसार आपत्ती जनाउने एक नेपाली युवती थिइन् ।
पुस्तकालयका एक युवा कर्मचारीले पूर्व र पश्चिमको दिशा देखाएर ती युवतीलाई सोधे– उसो भए बुद्ध यता जन्मेका हुन् कि उता ? बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनी दावी गर्ने ती युवतीलाई संभवतः लुम्बिनीको भौगोलिक अवस्थितिका सम्वन्धमा जानकारी नै रहेनछ । वा उनी लुम्बिनी पुगेकै थिइनन् । उनी नाजवाफ भइन्, जुरुक्क उठिन् र बाहिरिइन् ।
July 1, 202105 mths
काठमाडौं उपत्यका कुनै बेला तलाउको रुपमा थियो भन्ने कुरा साहित्यिक स्रोतहरुमा उल्लेख पाइन्छ । अन्वेषणपछि ये कुराके पुष्टि पनि भयो । हजारौं वर्ष अघिको तलाउ अहिले एउटा सुन्दर र समृद्धिशाली उपत्यकाको रुपमा विकास भएको छ । नेपालको राजधानी यही उपत्यकामा पर्दछ । त्यसो त करीव […]
यो वर्षको मनसुन शुरु हुने वित्तिकै नेपाली जनमानसलाई थर्काउने गरी आयो । मनसुन आएन मात्र, यसले थुप्रै वितण्डा बोकेर आयो ।
मौसमविदहरूले मनसुन लाग्नु अगावै प्रक्षेपण गरेका थिए, यो वर्षको मनसुनमा अरु वर्षभन्दा बढी वर्षा हुन्छ, सतर्क रहनुहोला ।
नभन्दै, मनसुन सक्रिय भएर असार १ गतेदेखि नै शुरु भएको वर्षाले मेलम्ची, हेलम्बु, मनाङ, मुस्ताङका अधिकांश क्षेत्रमा ताण्डव नै मच्चायो । असार १ बाट शुरु भएको प्राकृतिक विपदको कहरबाट पीडितहरू निस्केकै छैनन्, स्थायी बास भेटेका छैनन, फेरि असार १६ गतेबाट अधिक वर्षा शुरु भएको छ । हुनत यो मनसुन एक सय २० दिन रहने आंकलन गरिएबाट लामैं समय नेपालीहरूले सतर्कतासहित तयारी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रत्येक वर्षको वर्षात्मा पहिरोले घर बगाएको, बाढीले घर ड्ुबाएको, राजमार्ग पहिरोले छेकेको, बाटो छेकिंदा यात्रीहरू बाटोमा अलपत्र परेको आदि इत्यादि समाचार आउथ्यो । तर यो वर्षको मनसुन शुरु हुने वित्तिकै नेपाली जनमानसलाई थर्काउने गरी आयो । मनसुन आएन मात्र, यसले थुप्रै वितण्डा बोकेर आयो ।
यो वर्ष मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले खेत डुबाउने मात्र होइन थुप्रैको घरसमेत डुबायो, छोपि दियो, पर्लक्कै पल्टायो । दुई तलेसम्मको घरलाई पनि लेदो पानी, गेग्रान र ढुंगाले यसरी छोपिदियो मानौं त्यहाँमुनि घरको अस्तित्व नै छैन । घरलाई बाढीले १८० डिग्रीमैं पल्टाउनु भनेको चानचुने कुरा होइन । आफ्नो विग्रेको, भत्केको, डुबेको, छोपिएको घरलाई हेर्दैै पीडितहरू रोएको दृश्य हेरिनसक्नुको छ । स्थानीयहरूले पनि कहिल्यै नदेखेको बाढीको रुप यो वर्ष देखे, भोगे । आफूले सम्हालेर राखेको सामग्री नभेट्टाउदा भनिने गरिएको ‘आकासले निल्यो या जमिनले खायो’ भन्ने उखान यो पटक वास्तविक सावित भएको छ ।
मनाङमा आएको रफ्तारको बाढीले बगाएको पुल, भत्किएका घरले स्वभाविक रुपमा हिमाली क्षेत्र अब जोखिममा परेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट्यायो । त्यहाँको भूगोल पनि बढी पानी तथा भेल थेग्न सक्ने खालको छैन । माटोका थुप्रोहरू तथा रुखविरुवा विनाका कमलो पहाडहरू धेरै छन् । पानी बढी भएपछि ती क्षेत्र बग्न थाल्छन् तथा त्यहाँ पहिरो जान्छ । त्यसले त्यहाँ समस्या आउने भयो । यस्तै हिमतालहरू फुट्ने जोखिम, हिमनदीको आकार बृद्धि वा हिमालमा हिउँ धेरै पग्लिनेजस्ता समस्या पनि आउन सक्छन् । यसैले हिमालतिर मनसुन जानु भनेको त्यहाँको प्रकृतिदेखि पहाड र तराईका जनजीवन सम्मलाई असर पार्ने जोखिम बढ्नु हो ।
हिमाली भेगको बाढीको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि व्यापक रुपमा पर्छ भन्ने कुराको प्रमाण सिन्धुपाल्चोकमा देखिएको छ । मेलम्चीमा बाढी आउनुको कारण पहिरो रहेको र त्यो पहिरो हिमाली क्षेत्रमा गएको प्रारम्भिक विवरण आएका छन् । मानवबस्ती नभएको ठाउँमा गएको पहिरोले प्रकृतिमा क्षति पु¥यायो भने तल्लो क्षेत्रमा आंकलन नै गर्न नसक्ने गरी जनधनको क्षति गरेको छ । माथि जहाँ पहिरो गयो त्योभन्दा बढी हेलम्बु, मेलम्ची लगायतका ठाउँमा देखिएको क्षतिलाई हेरेर पनि हामी हिमाली क्षेत्रमा संकट आउनु भनेको पहाड तथा तराइमा समस्या आउनु हो भनेर बुझ्न सक्छौं ।
हुनत मौसमविदहरूले अनुमान मात्रै गर्दै आएको कुरा यसपालि मनाङ, मुस्ताङ लगायतका ठाउँमा देखिएको छ । यस्ता प्राकृतिक विपदजन्य घटनाबाट जनधनको क्षति कम गर्न सरकार तथा स्थानीय निकायले नदी तटीय क्षेत्रहरूमा चेतावनी वा जानकारी दिने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा, पालिकाहरूले आफ्नो ठाउँको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर यथार्थ कुरा स्थानीय जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ ताकि बढीभन्दा बढी सुरक्षित गर्न सकियोस्, स्थानान्तरण गर्न सकियोस् । हुनत, मेलम्चीमा सम्भावित दुःखद घटनालाई आंकलन गर्दै स्थानीय सु्रक्षा निकायले स्थानीय बजारका घरहरू खाली गर्न केही घण्टा आगाडि नै माइकिङ गरेको थियो । तर, यस आगाडि कहिल्यै त्यो स्तरको भयावह नदेखेका स्थानीयले चेतावनीलाई पनि नीच मानेर घरमैं बसिरहे । चेतावनी सुनेर पनि नीच मानेर बसेकी एक पीडित महिलाको कथन छ, भात पकाएर खाएर जाऔला भनेर बसेको, भात त पाक्यो तर पानी घर भित्रै आउन थालेपछि भात चाहिं खान पाइएन ।
नेपालमा मुख्यतयाः बाढी, पहिरो, अधिक वर्षा, चट्याङ, हावाहुरी, सर्प दंश, आगलागी, जनावरबाट हुने आक्रमणलाई विपदका रुपमा लिइने गरिएको छ । जलवायु तथा मौसम विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सन् २०११ देखि २०२० सम्मको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने ५६ प्रतिशत परिवार बाढीबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यस्तै, १७ प्रतिशत आगलागि, १४ प्रतिशत हावाहुरी, ४ प्रतिशत अधिक वर्षा र ६ प्रतिशत पहिरोबाट प्रभावित परिवार देखिन्छ । यी सबैखाले विपदबाट जोगिन तथा सम्भावित विपदका घटना हुन सक्ने ठाउँका बस्ती सार्नेदेखि उद्धार, राहत लगायतका विषयमा पनि पालिकाहरू तथा सरकारी निकाय तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । सरकार तथा स्थानीय निकायले विपदबाट पीडितहरूका फाइललाई यो मन्त्रालय र त्यो मन्त्रालयमा अड्काएर वर्षौसम्म पीडितकैं अवस्थामा झुलाएर राख्ने वातावरणबाट मुक्त हुन जरुरी छ
June 29, 202101 min	5 mths
मान्छेको खुशीले जब चुचुरो टेक्छ, चिच्याउने, उफ्रिने वा नाच्ने गर्दछन् र यो दृष्य यहाँ बडो मज्जाले देखियो । अघिसम्म ट्वाँ परेर हेरेर बस्ने एक अधवैंशे महिला अनायास नै झरनाभित्र पस्छिन् , युवायुवतीहरुकै लहलहैमा लाग्छिन् र निथु्रुक्क भिजेर निस्कन्छिन् ।
घुम्दैफिर्दै हामी पूर्वतिर लाग्यौं । अलि ओरालो झरेर अलि पर गइसकेपछि गुजमुच्च परेका घरहरु देखियो, गुरुङ वस्तीको नमूना नै भन्दा हुन्छ यस्तोलाई ।
June 29, 202105 mths
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐनले प्रभावितलाई सहयोग पुग्ने कुरा बोलेको छ । यसको दायरा फराकिलो छ ।
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण भएपछि पनि काममा छिटो छरितोपना किन देखिन सकेको छैन ? विपद ब्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र लाभग्राहीको हितमा काम गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमसँग विपद पत्रकारिता सञ्जालले गरेकाे संक्षिप्त कुराकानीः
विपद ब्यवस्थापन दैवीप्रकोप उद्दार ऐन २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरेर सरकारले यो ऐन ल्यायो । यो के आधारमा भिन्न छ ?
विगतको कानुनले ब्यवस्थापनलाई मात्रै समेटेको थियो । त्यो सीमित घेराभित्र थियो । जोखिम प्रभावितलाई पूर्णलाभ हुनुपर्छ भन्नेमा मौन थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐनले प्रभावितलाई सहयोग पुग्ने कुरा बोलेको छ । यसको दायरा फराकिलो छ । यो ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि समेटेको छ । विपद्को तत्काल रेस्पोन्स र पुनर्निर्माणलाई यसले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विपद्ख ब्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निमार्णका लागि प्राधिकरणले सरकारलाई सुझाव दिन्छ । आवश्यक रणनीति तथा कार्यविधि निमार्णमा सरकारलाई यसले सुझाव दिदै आइरहेको छ । यसले राहत ब्यवस्थापन प्रकोप सम्बन्धी खोज अध्ययन, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोतको परिचालन गर्छ । दातृ निकाय र स्थानीय निकायबीच समन्वय गर्दै विपद ब्यवस्थापन उद्दारका लागि आवश्यक तालिम दिने काम पनि यस अन्र्तगत पर्दछ । विपदसम्बन्धी आवश्यक जनचेतना जगाउने सूचनामूलक सामग्री निर्माण गर्ने, सुसूचित गर्ने, पाठ्यक्रमहरूमा विपद ब्यवस्थापनका विषयलाई प्राथमितकतामा राख्ने पनि गर्दै आईरहेको छ ।
विपद् संघारमा आइसकेपछि मात्र हतारिने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ, विपद न्यूनीकरण र ब्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी र जोखिम कम गर्ने बनाउन सकिएला ?
विपद ब्यवस्थापन आफैंमा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो । विपद न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी नै मुख्य हुन्छ । स्थानीय स्तरका सवालमा स्थानीय जनसमुदाय नै बढी जानकार हुन्छन्, त्यसैले स्थानीयकै चासो बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्ला ऐन कानुनले स्थानीय तहलाई प्रशस्तै अधिकार दिएको छ । राज्यको पुर्नसंरचनासंगै स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकारहरू छन् । अबको दिनमा स्थानीय तहले यदि कुनै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती बिस्तार हुँदैछ भने ती स्थानमा संरचना निमार्ण गर्न स्थानीय तहले रोक लगाउन सक्छ । जोखिम क्षेत्र छ भन्ने पहिचान भएको छ भने स्थानीय तहले घर निमार्णका लागि नक्शा पास नगर्न पनि सक्छ । अबको दिनमा जोखिम नक्शांकनलाई प्रभावकारी बनाउन सके संभावित जोखिममा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहहरूबीचमा समन्वयको अभाव देखियो, कानुनले प्रशस्त अधिकार दिए पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन, किन ?
तत्काल प्राधिकरणले शाखा शुरु गरेको छैन । आगामी दिनमा देशभर शाखा बिस्तार गर्ने भन्ने छ । समन्वयको कुरा गर्दा निराश भईहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । बाढी, पहिरो, जलजन्य प्रकोपका बिषय भएको हुँदा यो अन्य विभिन्न मन्त्रालयसँग पनि जोडिएर आउने विषय हो । शहरी विकास मन्त्रालय पनि यसैसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो । नदी नियन्त्रण दीर्घकालीन योजना बनाएर पूर्वतयारीका कामहरू आगामी दिनमा अझै राम्रो हुँदै जानेछन् । सोहि अनुसार कार्य योजना बन्दैछ ।
सम्बन्धित लेखकाे लागि पढ्नु हाेस